Yako B2B Maitiro Ekutengesa Haina Kugadziridzwa kuRwendo rweMutengi | Martech Zone
Zvakanaka… izvi zvicharuma zvishoma, kunyanya kushamwari dzangu mukutengesa:
Vatengesi zvikwata zviri kunetsekana kusangana nevatengi uye kusangana nezvinangwa zvavo zvichitungamira mukurasikirwa mukugadzirwa kwekutengesa. Mutengi ari kuramba achiomera kusvika, zvichitungamira mukutengesa kugadzirwa kwemametric kudonhedza padombo. Kana vatengesi vachizopedzisira vataura nechinangwa chavo, vanoonekwa nemutengi sevasina kunyatsogadzirira, kunyanya nekuti mutengi wanhasi anoziva huwandu hweruzivo uye maonero zvisati zvaitika nekutengesa. Vatengi vari pasi pehurombo havasi kukoka vatengesi kudzoka kuti vatore nzira iyi kumberi, zvinoreva kuti mari nesimba rakaiswa mukusvikira vatengi ivavo zvaparadzwa.
Kurwa kwangu kwehondo kwemakumi gumi ikozvino kwakafanana, kuti timu yako yekutengesa haisi kubatana netarisiro kwavari, kana chako chekushambadzira. Gore rega rega, zvinoita sekunge iyo Zero Nguva Yechokwadi - iyo poindi apo mutengi kana bhizinesi ari kugadzira yavo kutenga sarudzo - inoramba ichienderera mberi ichienda kure kure nekwasangana neako timu yekutengesa.
Iyi ndiyo kiyi yekushambadzira zvemukati uye nzira dzekushambadzira dzemagariro…… Kungo wedzera mamwe maSIFIF (Sales Performance Incentive Fund), zvinokurudzira, zvinangwa, kana kunyangwe tekinoroji hazvina kukwana.
Ndosaka tiri kukumbira vatengi vedu kuti vaenderere mberi kugadzira zvemukati zvinotakurika senge infographics, chena mapepa, nyaya dzenyaya, webinars, mharidzo pamwe nekutora yavo masangano ekutengesa anoita zvemagariro. Ndicho zvakare chikonzero nei tiri kushandisa zvirinani maturusi, senge IP ungwaru, kuona mabhizinesi anoshanyira saiti yako kuitira kuti iwe ugone kusvika nekubatana navo pamberi sarudzo yekutenga inoitwa.
MarketBridge yakagadzira iyi infographic kubatsira kufungidzira nyaya yacho. MarketBridge mhinduro dzinobatsira Kushambadzira uye Kutengesa kuwedzera pombi vhoriyamu, velocity, padyo mitengo, uye kuvimbika kwevatengi.
Tags: b2b vatengi rwendovatengi rwendopedyo mitengokuvimbika kwemutengiwedzera pombi vhoriyamumarketbridgeinvestengineemarikutengesa kutengesasmart analyticsspifsvelocity